सबै कलाकार छाडा हुँदैनन् | My News Nepal
सबै कलाकार छाडा हुँदैनन्
भावना गुरुङ – मोडल एवम् नायिका
पातलो शरीर, सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय, मिठो बोली । भावना गुरुङको विशेषता हो । गुरुङ भाषाको फिल्मबाट अभिनय यात्रा शुरुवात गरेकी भावना फिल्मी क्षेत्रका लागि धेरै चर्चित नाम होइन । तर, उनी फिल्म र कलाक्षेत्र भनेपछि अगाडि आइहाल्छिन् । उनले पछिल्लो समय ‘स्वर्ग मेरो गाउँ’मा अभिनय गरेकी छिन् । केही महिना अगाडि फिल्म खेल्नकै लागि उनी भारतको मुम्बई पनि पुगेकी थिइन् । बिडम्वना उनी छनौट भइनन् । लाइनमा बसेर अडिशन दिएकी भावनाले मुम्बईको फिल्मी क्षेत्रबाट आफू निकै प्रभावित भएको र सिक्नुपर्ने धेरै कुरा रहेको बताउँछिन् । खुलेर कुरा गर्नु उनको अर्को विशेषता हो । उनै भावना गुरुङसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीसँग गरेको कुराकानी :
० कलाक्षेत्रमा लागेको कति भयो ?
– कलाकारितामा लागेको ५÷६ वर्ष भयो । मैले फेशन शोबाट मोडलिङ करियर शुरु गरेको हुँ । ¥याम्पमा हिँड्न राम्रो लाग्छ । हाइटले र शरीरले मलाई साथ दिएको छ ।
० तपाईको घर चाहिँ कहाँ हो ?
– पुरानो घर चितवनमा हो । अहिले काठमडौंको सामाखुसी बस्छु ।
० कला क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभयो ?
– सानैदेखिको सौख हो । शुरुमा र्याम्पमा मोडलिङ गरेको थिएँ । २÷४ वटा ¥याम्पमा हिँडे । त्यसपछि गुरुङ भाषाको फिल्ममा अभिनय गर्ने मौका मिल्यो । त्यसपछि कला क्षेत्रमा तानिएँ ।
० कला क्षेत्रमा लाग्ने बेला घर परिवारको सहयोग थियो ?
– शुरुमा त घर परिवारबाट केही समस्या थियो । तर, मेरो आफ्नै लगाव भएका कारण अहिले सहयोग भइरहेको छ । मेरी आमा गाउने र नाच्नका लागि सौख राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । आमाको सौखले गर्दा मलाई फिल्म क्षेत्रमा लाग्न सहयोग मिल्यो ।
० तपाईलाई मन पराउने त धेरै होला नि ?
– छन् । धेरैले मलाई मन पराउनु हुन्छ । मैले पनि शुभेच्छुकहरूलाई मन पराउने गरेकी छु ।
० मैले त्यसो भनेको होइन । बिहे गर्ने गरेर मन पराउनेको कुरा गरेको नि ?
– त्यो पनि हो । बिहेका प्रस्ताव आउँछन् । त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कुरा छैन ।
० फिल्ममा अभिनय गर्ने महिला कलाकारहरूलाई समाजमा राम्रो रुपमा हेर्दैन भन्छन् किन होला ?
– मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हरेक क्षेत्रमा राम्रा र नराम्रा सबै गुण हुन्छन् । कलाकार सबै नराम्रो हुन्छन भन्ने होइन । त्यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो । समाजले कसरी हेर्छ भन्दा पनि समाजलाई मैले कसरी प्रस्तुति दिइरहेकी छु भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । समाज नहुने हो भने कलाकार पनि त हुन सकिदैन नि ! यो विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएर जानुपर्छ ।
० फिल्ममा लाग्ने कलाकारहरू छाडा हुन्छन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?
– खै मलाई त्यस्तो लागेको छैन । म त्यसरी छाडा भएर बोलेकी छैन । हिँडेको पनि छैन । साथीभाईहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ । कसले छाडा बोलेको हो त्यो त म भन्न सक्दिन । आफू भलो हुनुपर्छ । जगत नै भेलो हुन्छ । पहिला आफूले आफैलाई सुधार गर्नुपर्छ । फिल्म क्षेत्रबाट नाम कमाएका थुप्रै कलाकार छन् । पुरुष मात्रै होइन महिला कलाकार पनि राम्रा छन् । के सबैलाई एउटै टोकरीभित्र राखेर हेर्न मिल्छ ? मैले शुरुमा पनि भने नि, हरेक क्षेत्रमा राम्रा र नराम्रा मान्छे हुन्छन् । त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । कलाकारितामा पछिल्लो समय धेरै राम्रा कलाकारको प्रवेश भएको छ । विकृति पनि छैन भनेको होइन । विकृतिलाई व्यक्तिले कुन रुपमा लिएको छ त्यसमा भर पर्छ ।
० तपाईलाई घमण्डी भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन् नि ?
– म आफूलाई त्यस्तो छु जस्तो लाग्दैन । सबैसँग सहज रुपमा कुरा गर्ने गरेको छु । मेरा कारण कसैलाई समस्यामा पारेको जस्तो लाग्दैन । खै केलाई हो घमण्डी भनेको ?
० तपाईको नाम विवादमा धेरै सुनिएको छैन । साँच्चै कुनै पुरुषसँग जोडिनु भएको छैन र ?
– मैले विवादित हुने कुनै पनि काम गरेको छैन । विवादत हुने व्यक्ति पनि होइन । आफ्नो काम गर्ने हो अरुको कुरा गर्ने होइन । किन विवादमा आउनु प¥यो ? मैले जहिले पनि सकारात्मक सोच्ने गरेको छु । कुनै पनि पुरुषसँग नाम जोडिएर आउनु पर्ने कुनै त्यस्तो गलत गरेको पनि छैन ।
० सामाजिक काममा सक्रिय कति छ ?
– त्यस्तो सक्रियता त छैन । आफ्नै संघसंस्था पनि छैन । तर, वृद्धवृद्धाको सेवा गर्न मनपर्छ ।
० अभिनयमा शिक्षा लिनुभएको छ ?
– कुनै औपचारिक शिक्षा लिएको छैन । तर, डान्स क्लास र क्याटवाकको शिक्षा लिएको छु । अभिनयको क्लास लिएको छैन ।
० सेक्सको बारेमा तपाईको धारणा के छ ?
– सेक्स प्राकृतिक देन हो । हामीले बनाएको होइन । भगवानले दिएको कुरा हो । यस विषयमा धेरै सोच्नु पर्ने वा परिभाषा दिनुपर्ने आवश्यक्ता छैन ।
लागूऔषधको ट्रान्जिट बन्यो मकवानपुर, प्रहरीले बढायो सक्रियता
पाँचथर हत्या काण्ड : भागेर बाँच्न सफल १२ बर्षिया बालिका सीता खाजुमको यस्तो बयान
२०७६ जेष्ठ ७ गते